Maxaabista Lamaanaha: Sida Looga Gudbo - Talooyinka Ragga Qaaliga Ah | Ragga Stylish
Kuwani waa waqtiyo aad u adag oo saameeya malaayiin qof oo adduunka ah iyo xabsi ku jira lamaane ahaan. Waxay noqon doontaa caqabad weyn oo badbaado, ku milmida wixii aan waligood dad sidan oo kale la saarin. Waa inaan ilaalino lifaaqa isla qolka, muddo dheer, iyo taas badanaa waxay ku lug leedahay ilaalinta ixtiraamka.
Ku xirnaanta labada lamaane waxay ku habboon tahay mid ka mid ah jilayaasha waaweyn ee waxaan u maarayn karnaa sida caqabadda kaliya iyo tan ugu weyn nolosheena. Waxay noqon doontaa wax iyo mid gaar ah oo hadda way ka fiicantahay sidii hore waa inaan taageernaa xirida iyo maaraynta nolosheena lamaane ahaan. Halkan waxaan ku soo jeedineynaa tallaabooyin kaa caawin kara.
Sida looga gudbo xayiraadda lammaanaha
Ma heli karno inaan qiimeyno maxay keeni doontaa in la xidho inta intaa leeg xitaa waxaad arkaysaa isla qof maalintii oo dhan. Xaaladdaani way adagtahay in la ilaaliyo, xitaa qiil looma heli karo in uusan jiri karin khilaaf yar ama lammaanaha ugu fiican ee deggan. Inta badan, dheelitirka si sax ah looma hagaajin doono iyo dhimbiillo ayaa u duulaya maaddo kasta. Is-jeclaysiinta iyo ixtiraamku waa laba shay oo isku mid ah oo ku kooban jidhkeenna taasna waa inaan isku dheelitirnaa annaga oo dejinayna fikradaheena.
Waa in lagaa qaado xaalada: xaqiiqda ah inaad si joogto ah u dhageysato wararka xun ayaa naga dhigaysa waxay ku tiirsan tahay jirro guud. Noocyada noocan ah waa in marka hore la maleeyaa, maxaa yeelay burushka ugu yar qofka kale dood baa ka dhalan karta. Sidaa darteed naftaada ha lagaa qaado xaalada oo aqbal waxa dhacaya, ma jirto wado kale oo macquul ah oo looga bixi karo.
Waa inaad ilaalisaa jadwalkaaga: waa inaan wax ka qabannaa xaaladdan iyada oo aan la helin dadaal dheeraad ah, waa hawl aan lagu soo rogin rabitaankeenna sidoo kale maahan inaad sameyso waxyaabo aadan horay u sameyn jirin. Waa muhiim u hel jadwal dhammaan daqiiqadahaas in aadan wadaagin, markaad guriga joogin.
Haysashada meel gaar ah waa muhiim: dhamaanteen waxaan ubaahanahay boos u gaar ah. Tan darteed maahan inaad dejiso ama aad abuurto danaysi shaqsiyan ah inuu qofkaasi wax walba kula wadaago, laakiin halkii isku day inaad dhisto dariiqa aad uga baxsato. Waa inaad isku day inaad raadiso booskaaga oo u hibee daryeelkaaga shakhsi ahaaneed, akhrinta buug ama wax kastoo aad ku dareento fiicnaan.
Meel u bannee dadka kale: inkasta oo aan ognahay inaynaan jir ahaan samayn karin, Maaha in aan ka quusano joogteynta howlaha wada xiriirka dadka kale. Waa inaan ilaalinaa cilaaqaadka bulshada ee firfircoon dadka kale, aakhirka waa xaalad dusha sare ka saareysa oo aan naga dhigeynin inaan dareemo kali.
Waqti aad ku milicsato lamaanahaaga: hadda waxaa la joogaa waqti badan oo wadahadal ah, oo lagu wadaago shucuurta iyo tabashooyinka. Waxaa nagu adkaaday xaalada iyo culeyska maskaxda iyo waa inaad ogaataa sida loola wadaago dareenkaas iyada oo aan ujeedadu ahayn in cid wax loo yeelo.
Waa inaad u furnaataa dareenkaaga: Waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad naftaada u oggolaan lahayd inuu dareenkaaga kaa qaado oo aad muujiso wax kasta oo aad isku jeceshihiin. Xaaladdan uga dhig daqiiqad gaar ah isku day inaad ogaato wanaagga iyo wanaagga uu u qabo qofka kale, in kasta oo iyaduna ay mudan tahay in la isku dayo ogaadaan danayn la'aanta iyo xoogaa raaxo la'aan ah, laakiin wadahadal furan oo wanaagsan iyo ulajeedada aqbalida.
Kuwani maahan waqtiyo lagu soo qaado dharka wasakhda ah ama lagu xisaabtamo: dad badan ayaa ka faa'iideysta xaaladan raaxo la'aanta iyo inay awoodaan inay la dagaallamaan Waxay u jeestaan ​​qofkii ay jeclaayeen si ay ula qabsadaan arrin taagan. Tani waa wax ay tahay inaan u qaadano oo aan si madaxbanaan u dhexgalno.
Ku dadaal sida ugu fiican inaad wax walba u keento sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan. Sharaxaadda noocan ah waxaan ku sii wadi doonnaa inaan ixtiraam ku abuurno lammaanaheenna. Ha isku dayin inaad had iyo jeer ka fikirto waxa "aad u malaynayso" laakiin sidoo kale "Waxaan u malaynayaa" iyo "Waxaan dareemayaa", isku day inaad fikirkaaga ku dhejiso shakhsiyaddaada, laakiin leh fikrado dhexdhexaad ah oo aan haba yaraatee danaysi lahayn. Ha u dareemin inaad tahay dhibbane ama qofka kale ha ka dhigin inuu dambi leeyahay wax walba, si fudud dejiso dareenkaaga oo u sheeg wax walba oo naxariis leh. Qofka kale waa inuu yaqaan sida loo dhageysto loona aqbalo.
Raadi daqiiqado xiiso leh. Waxaa jira qaabab iyo midabbo aan la tirin karin markay tahay mala-awaalka daqiiqado wacan. Sii deynta endorphins wada iyadoo daqiiqado baxsad ah iyo qosol ay ka caawineyso in xaaladdan si fiican loo wajaho. Waxaa jira fursado aan dhammaad lahayn, sida inaad awood u leedahay inaad aragto filim ama taxane aad jeceshahay, ciyaaraha fiidiyowga, ciyaaraha looxyada, sameynta nooc ka mid ah isboortiga aerobic, qoob-ka-ciyaarka iyo xitaa heesta karaoke.
Laga yaabee in kuwani ay yihiin waqtiyada ugu wanaagsan ee la barto inaad ku korto lamaanahaaga. Iyagu waa daqiiqado milicsi waxayna ku wanaagsan yihiin qorshaynta qorshooyinka mustaqbalka iyo fikradahaaga u mari sida ugu macquulsan. Haddii aad maanka ku hayso mashaariic wanaagsan oo aad fursad u leedahay in aad maalin uun wax uun u beddesho si ka wanaagsan, Hadda waa markii aad ka faa'iideysan karto fursadda aad ku wada sameysid qorshooyinkaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Ku xirnaanshaha lammaanaha: sida looga gudbo